मधुपर्क - Gorkhapatra | Nepal's First News Organization
जिन्दगी खोजिरहेको यात्री र पुडुचेरी (निबन्ध)
नयाँ वर्षको पहिलो बिहान । रातिदेखि नै शुभकामनाहरू आउनुपर्ने । म्यासेजको टिङ टिङले निन्द्रा बिथोलिनुपर्ने तर एक्कासि मिश्र सरको फोनले बिउँझिन्छु । ढिलो भइसकेछ । हतार हतार तयार भएर निस्कन्छु । बिहानी सूर्यसँगै उज्यालिएको छ समुद्र र यहाँको परिवेश । समुद्रको यो उज्यालोसँगै म उज्यालो अनुहार सम्झिन्छु, जो अक्सर समुद्र किनारमा मेरो पाखुरा समाएर हिँड्ने रहरमा उज्यालिन्थ्यो । आज यहाँ यतिखेर उनी छैनन् । उनी यहाँ भएकी भए कति खुसी हुन्थिन् होला । कति उत्साहित हुन्थिन् होला । मलाई उनीभन्दा पनि उनी खुसी हुँदाको क्षणले सताउँछ । उनको अनुहारको खुसी देख्न सधँै लालायित हुन्छु म । त्यसो त उनको अनुहारको उज्यालो सम्झिएँ भने अहिले नै अँध्यारो हुनेछ यो समुद्री किनार, भर्खरै उदाएको घाम र यहाँको परिवेश । उनको अनुहार र मनमा रहेको उज्यालोले मेरो जीवनको गोरेटोभरि प्रकाश छरिदिएको छ । मेरो जीवनमा उनको उपस्थितिले मेरो जिउने सिलसिला नै बदलिएको छ ।
यो कस्तो सम्बन्ध ? (कथा)
मेरो पछाडि आएर उभिरहेकी रहिछन् डेवी वार्नेर । आफ्नो काम सकेर फनक्क फर्किंदा डेवी मुसुमुसु हाँसेर मतिर हेरिरहेकी । “ओ डेवी यस्तो जाडोमा पनि तिमी आएकी ?” “उफ् ! सारा आज बाहिर अति नै जाडो छ, तिमीलाई थाहा छ आज कति चिसो छ ?” “सरी मसित अहिले मोबाइल छैन, तिमीले हेरिकी हौ कति चिसो रहेछ ?” “मैले घरबाट निस्किँदै हेरेको, माइनस १५ डिग्री छ ।”
अलमलमा वैशाख (कविता)
साम्ब ढकालकालचक्रको अर्को फर्लाङ नाघेरअन्ततः सँघारमा छ वैशाखछ न त छ तर अलमलमा छ ।भोलिको अस्पष्ट तस्बिर छातीमा टाङेरढलपल ढलपल हिँडिरहेको वैशाख यसै उसै अलमलमा छ ।आँखाभरिको सबैभन्दा सुन्दर सपनाका लस्कर तितरबितर पारेरनीरस र शुष्क दृश्यांशको थोत्रो क्यानभास वर्तमानको भित्ताभरि टाँसेर किंकर्तव्यविमूढमा छ वैशाख ।सुक्न नपाएर गालाभरि आँसुका टाटैटाटा बोकेरप्रारब्धका हत्केलाले छोप्दै÷ देखाउँदै विद्रूप अनुहारलड्खडाउँदै लड्खडाउँदै खै कता हिँडिरहेछ वैशाख ।जुगौँ जुग बित्छ कि क्या हो हिम्मतिलो वैशाखको काँधमा चढेर संसार हेर्ने धोको पूरा हुनयो जुनीमा पुग्दैन कि क्या हो सुख र चैनको लामो श्वास तानेर रनबन डुल्ने यादृच्छापलपल मृत्युछायाले दपेटिरहेकाले होला प्रत्येक आगतहरूसँग जीजिविषा विनिमय गर्न वैशाख पर्खिरहेछु ।पट्यार लाग्दा दिनहरूको खातमा खात थप्दैनिख्रिसकेर विगत बनिसकेको वैशाखको भो फेहरिस्त नपढूँ होला आजकल वैशाख आफैँ बिरामी हुँदैरोगी समय ओसारी रहेको टुलुटुलू भो नहेरौं होलासबैभन्दा सुरम्य याम पर्खेको युगौँ भयो यही वैशाखमा आउँछ होला भनेर विश्वस्त हुँ कि नहोऔं होलाखासमा मैले –मेरै देशको महक बोकेर आउने वैशाख खोजेकोमेरै गुराँसको रक्ताभ र हिमालको श्वेताभ बोकेर आउने वैशाख खोजेकोमेरै अन्नको मिठास उबाएर पियाउने वैशाख खोजेकोम त अलमलमा छु, छु अब त वैशाख पनि कस्तो वैशाख भएर आउने हो अलमलमा छ । ‘गन्तव्य’ चिल्ड्रेन पार्क सडकहेटौँडा–४, हुप्रचौर ।
सत्ता र सत्य (कविता)
स्नेह सायमिमैले भनेँम तिमीसँगसँगैकाम गर्न चाहन्छु,चालीस वर्षअघिपरिवर्तनकोजे शिक्षा दिएका थियौ तिमीलेत्यो आजतिमीले सत्ताको बागडोरसम्हालेको बेलाआम मानिसको पक्षमाकेही गर्न चाहन्छु,यसो भन्दै गर्दाउसले मतिर यसरी हे¥योजसरी बाजले सिनोलाई हेर्छअग्लो घरबाट सडकमाउसले यसरी थुक्योजसरी पान चपाउनेलेसफा भित्तामा थुक्छअनि भन्यो–हिजोको कुराहिजोको परिचयहिजोको वाचाभो यो नयाँ दिनमानसम्झाउनुयो पुरानै कुरामालागिरहने सोचनदोहो¥याउनुभोटलेतार्किक र तर्कहीनअनुशासित र अनुशासनहीनबीचकुनै दुरीनदेख्दो रहेछहामीलाईआँखा भएका अन्धाहरूभए पुग्छहामीलाईनयाँ लुगामा सजिएकाहिँडिरहनेलासहरूबाटैकाम चल्छनयाँ सत्तामापुरानो मान्छेपुरानो विचारपुरानो यादपुरानो कसमभोनसम्झाउनु ।